काठमाडौं। सेक्युरिटी प्रेसको कमिसन प्रकरणमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा मुछिएका छन्। उक्त प्रेस स्थापनाका लागि एक स्वीस कम्पनीका नेपाली एजेन्टसँग बाँस्कोटाले करोडौं कमिसन मागेको भनिएको अडियो टेप सार्वजनिक भएसंगै विषय गरमागरम हुदैं गएको छ। त्यसो त बास्कोटाले उक्त टेपमा बोल्ने व्यक्ति आफू भएको घुमाउरो पाराले स्वीकार गर्दै कुनै गल्ती नगरेको बताएका छन्।
नेपालमा नै बैंक नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्डलगायतका कुरा छाप्नका लागि एउटा सेक्युरिटी प्रेस जडान गर्ने कुरा धेरै पहिलादेखि नै उठे अनुसार एक नेपाली एजेन्टसंग गरिएको कुराकानीले तरंग ल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न समयमा प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि काम अघि बढेको थिएन। सरकार परिवर्तन भइरहने हुनाले हरेक सरकारले आफूअनुकूल प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै आएका थिए। तर यसैवीच दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारका प्रवंक्ताले बोलेको कमिसनको कुराले सरकार अनि संञ्चारमन्त्रीको चौतर्फी विरोध भईरहेको छ।
उता उक्त समाचार बेक्र गर्न नपाएको निहुँमा नयाँ पत्रिकामा कार्यरत पत्रकार पुष्प ढुंगानाले पत्रकारिताबाट नै संन्यास लिन सक्ने आशय सामाजिक संञ्जालमा व्यक्त गरेका छन्। उनले लेखेका छन्। “मेराे पत्रकारितामा निकै नमिठाे अनुभव, मन्त्रीको कमिशन अडियाे पेश हुँदासम्म समाचार बनाउन सकिएन । ग्लानी याे अर्थमा कि मैले कसका लागि पत्रकारिता गर्दैछु ? खरदारले सय रूपैया घुस खाएकाे समाचार लेखेर मन्त्रीको अनियमितता लुकाउन सकिँदैन । त्यसकारण पत्रकारिताकाे यात्रामा ब्रेक लगाएकाे छु।” पत्रकार ढुंगानाले सामाजिक संञ्जालमा व्यक्त गरेको असन्तुष्टि यस्तो छ।
उता संञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरणलाई लिएर साझा पार्टीका प्रवंक्ता सूर्यराज आचार्यले, ‘घुस कमिसनको बार्गेनिङ मात्र गरेको हो त,घुसै खाईसकेको त हैन नी! त्यसैले घुस खाएको भन्ने आरोप मिलेन भन्ने व्याख्या आउने त हैन? अझ यो कुराकानी त कमिसन एजेन्टलाई एकस्पोज गर्न रचिएको हो भन्ने स्पष्टिकरण नआँउला भन्न सकिन्न! त्यसो नहोस् संञ्चारमन्त्रीलाई तत्काल बर्खाष्त गरियोस्, भन्दै आचार्यले टुवीट गरेका छन्।
त्यसैगरि नेता बाबुराम भट्टराईले पनि अरुको आँङको जुम्रा खोज्नु भन्दा पहिला आफ्नै आँङको भैंसी हेर्ने हो की प्रधानमन्त्री ज्यू! ‘यही हो भष्ट्राचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भनेको’ भन्दै टुवीट गरेका छन्।
त्यसैगरि साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले भ्रष्ट्राचारीहरु समाजका धमिराहरु हुन्। तिनीहरुको हालीमुहाली रहने वातावरणको कायम भएसम्म जस्तो सुकै व्यवस्था भएपनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन् भन्दै टुवीट गरेका छन्।